pays bas - ewa.mg
Kitra – «ligue des nations 2018»: resin’i Pays-Bas 2 no ho 0 i Frantsa
Lavo ny andrarezina. Resin’ny Pays-Bas, tamin’ny isa mazava, 2 no ho 0 ny Les Bleus Frantsa, tompondaka eran-tany 2018, teo amin’ny fiadiana ny «ligue des Nations », taranja baolina kitra. Fihaonana, notanterahina tao amin’ny kianja Rotterdam, ny zoma lasa teo. Tsy nampoizin’ny Frantsay mihitsy ny nahazo azy, tamin’ity fihaonana ity. Ratsy toerana tanteraka, araka izany, ny Frantsay, amin’ity fifaninanana ity ary mety tsy ho tafiditra ao anatin’ireo ekipa manao ny “final four”. Nampiditra ny baolina voalohany, i Georginio Wijnaldum, teo amin’ny minitra faha-44 rehefa namerina baolina i Lloris, taorian’ny dakan’i Babel. Ny baolina faharoa tafiditra dia matin’i Memphis Depay, tamin’ny alalan’ny “penalty”, teo amin’ny minitra faha-95, nilalaovana. Zary lasa nofy ratsy ho an’ny Frantsay ity lalao ity, satria teo amin’ity kianja Rotterdam, ity no nandrombahan’izy ireo ny “Euro 2000”, rehefa nandresy an’i Italia, tamin’ny isa, tery 2 no ho 1 teo amin’ny famaranana. Mety hanalavitra an’i Kyllian Mbappé, ihany koa ny fahazoana miady ny “ballon d’or”, ho an’ity taona 2018 ity. Tsy namiratra mihitsy mantsy ny tovolahy nandritra ity fihaonana ity. Torcelin